चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने
मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ०६:३२ मा प्रकाशित !
८ चैत, काठमाडौँ। उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनका रक्षामन्त्री जनरल चाङ वानक्वान आगामी बिहीबार नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा आउने भएको छ । रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणको निमन्त्रणामा उनको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउन लागेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा जनरल चाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शिष्टाचार भेट गर्नाका साथै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र रक्षामन्त्री खाँणसँग भेटवार्ता गर्नेछ । रक्षामन्त्री चाङले भूकम्पबाट क्षति भएका वसन्तपुर र भक्तपुर दरबार स्क्वायरको समेत अवलोकन भ्रमण गर्ने बताएको छ ।
चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा आपसी हित, द्विपक्षीय चासो तथा सहयोगका बारेमा छलफल हुने रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमप्रसाद नागिलाले जानकारी दिए । नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चीनको सबैभन्दा ठूलो सहयोग रहँदै आएको छ । चीनले पछिल्लो समय नेपालका ऊर्जा, सडक सञ्जाल, प्रविधि तथा व्यापार क्षेत्रमा लगानी र सहयोग गरिरहेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: माइती नेपालले सीमा नाकाबाट ५ महिलाको उद्धार गरे
NEXT POST Next post: एन्जेलिक केर्वर पुनः विश्व नम्बर एक स्थानमा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ०६:३२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ०६:३२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ०६:३२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ०६:३२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ०६:३२